at 9:34 AM Labels: ရိုးရာအစားအစာ
ရပ်ဝေးရောက်နေတဲ့ မောင်နှမတွေ တစ်ခါတလေ ပဲနံပြားလေး စားချင်လိုက်တာ၊ ပဲပလာတာလေး
စားချင်လိုက်တာ၊ ကတ်ကျေးကိုက်လေး လုပ်စားချင်လိုက်တာ၊ မနက်စောစော အိပ်ယာနိုးရင်
ပဲပြုတ်ဆီဆမ်း ထမင်းလေးနယ်စားချင်လိုက်တာ့့့  အဲ့ဒီလိုမျိုး တောင့်တတတ်တဲ့ စိတ်ကို
အစာကျွေးဖို့အတွက် စားတော်ပဲ အညှောင့်ဖေါက်တာလေးကို ပြောပြလိုက်ရပါတယ်။ လုလုတို့
အိမ်ဘေးနားမှာနေတဲ့ ပဲပြုတ်ရောင်းတဲ့အဒေါ်ကြီးဆီက သင်ထားတာ။ စားတော်ပဲက အခွံထူတယ်၊
အဲ့ဒီတော့ သူက လွယ်လွယ်နဲ့ အညှောင့်မထွက်နိုင်ဘူးလေ။ အဲ့ဒီတော့ စားတော်ပဲကို စနေနေ့
မနက်မှာ စားချင်တယ်ဆိုရင် ကြာသပတေးညကတည်းက ရေနွေးကြက်သီးနွေးနဲ့ပဲကို
အရင်စိမ်ရပါတယ်။ သောကြာနေ့မနက်ကျရင် အဲ့ဒီပဲစေ့လေးတွေကို ဆယ်ပြီးတော့
ပိတ်ပါးစထဲ ထည့်ပြီး ထုပ်ထားပါတယ်။ ပြီးတော့မှ အဲ့ဒီပဲထုပ်လေးကို သောက်ရေအိုးစင်အောက်
လေးမှာ ဇလုံလေးနဲ့ထည့်ပြီး သောနေ့တစ်နေ့ကုန်ရယ် တစ်ညရယ် ထားရပါတယ်။ စနေနေ့
မနက် ၄ နာရီလောက်ကျတော့ အဲ့ဒီအထုပ်လေးကို ဖြေလိုက်တဲ့အခါကျရင် ပဲစေ့တွေရဲ့ အညှောင့်က
အဲ့ဒီပိတ်ပါးစလေးတွေမှာ ကပ်နေပါတယ်။ အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ် ပဲပင်ပေါက်လေးတွေရဲ့ အညှောင့်
လေးတွေက တွန့်လိန်လိန်လေးတွေ ဖြူသလိုလို ညိုရောင်ခပ်ဖျော့ဖျော့လေးတွေလိုနဲ့ပေါ့။
အဲ့ဒီလို အညှောင့်ရလာပြီဆိုတဲ့ ပဲကိုမှ သူတို့က ပြုတ်တဲ့အခါမှာ ရေစပ်စပ်လေးထည့်၊
စားဆော်ဒါလေး နည်းနည်းထည့်ပြီး ပြုတ်၊ ပြီးတော့မှ အဲ့ဒီပဲပြုတ်ကိုဆားလေး သင့်ရုံထည့်ပိတ်ပါးစနဲ့
ပြန်ထုပ်၊ပြီးတော့မှ ပြန်ပေါင်းရတာ။ အဲ့ဒီအဒေါ်ကြီးပေါင်းတာကတော့ မြေအိုးပေါင်းချောင်ထဲ
ထည့်ပြီးပေါင်းတာ။ အနံ့ကသင်းပြီး လှိုင်နေတာပဲ။ အောက်က မြေရေနွေးအိုးကြီးတည်ပြီး အပေါ်ကနေ
ပဲထုပ်ထည့်ထားတဲ့ ပေါင်းချောင်နဲ့ပေါင်းတာ ဟိဟိ့့့  ပြောရင်း အိမ်သတိရလာသလိုလို့့့ 
အဲ့ဒီအဒေါ်ကြီးကို လွမ်းလာသလိုလို့့့  သူဈေးရောင်းမထွက်ခင် ကျွန်မက သူ့ပြုတ်တဲ့ပဲအိုးကို
နပ်မနပ်စောင့်ကြည့်ပြီး မြည်းတာ့့့  ဟိ့့့ (ကပ်စားတာပါ့့့ တကယ်တော့ သူ့ဘာသာသူ နပ်ပြီးသား)
ကျွန်မတို့က မောင်နှမများတော့ မနေ့ညကကျန်တဲ့ ထမင်းကြမ်းခဲကို ချေပြီး ပဲပြုတ်နဲ့ ပြန်ကြော်တာလေ။
တစ်ခါတလေလဲ ပဲအီကြာလုပ်စားတယ်၊ ပဲနံပြားလုပ်စားတယ်ပေါ့လေ။ ကပ်ကျေးကိုက်လုပ်စားတယ်။
တော်ပြီကွယ့့့်  စားစရာတွေချည်းပဲ ပြောနေတယ့့့်  စားတိုင်းသာ ၀မယ်ဆိုရင်တော့
ဂွမ်းပုံ၊ပွင့်ကတောင်အရှုံးပေးနေရမယ့် ကျွန်မအဖြစ့့့်  ဟင့့့် ရပ်ဝေးရောက်နေတဲ့သူတွေအဖို့ကတော့
မြေအိုးနဲ့ ဘယ်ပေါင်းနိုင်မှာလဲနော့့့်  ရိုးရိုးပေါင်းအိုးနဲ့ပဲပေါင်းလိုက်လဲ ရပါတယ်။ ကျွန်မကတော့
စားတော်ပဲရလာရင် ဒီမှာ အဲ့ဒီလိုပဲ အညှောင့်ဖေါက်ပြီး ပြုတ်လိုက်၊ပေါင်းလိုက်တာပါပဲလေ။
သူငယ်ချင်းတို့လဲ စမ်းသပ်ကြည့်ပေါ့နော့့့် 
Anonymous August 26, 2008 at 11:11 AM
Where can I get sa-daw-pae and what is its English name?
Anonymous November 30, 2008 at 7:43 AM
UK မှာ တော့ yellow peas ဆိုတာ စားတော်ပဲ ပါ. တခြားနိုင်ငံတော့ မ ပြောတတ်ဖူး နော်.
Shinlay January 11, 2009 at 2:48 PM
Thanks Ma Lu, I tried long time to get Pae Pout. Now with the help of your web and other friends I could manage it. In Germany we have Gelbe Erbsen. But I bought Gelbe Schälerbsen( without skin/Akon). It was notaright one. After cooking it was too soft and masch. We have to buy Gelbe Erbsen with skin( Akon). For soda, We use Haus Natron.
We can get Nanpar at the türkisch Shop. This morning I hadanice breakfast with Pae pout Nanpar.
Thanks to all,who help me to get Pae Pout Nanpar.
ပြုတ်တာက ဘယ်နှစ်နာရီ ပြုတ်ပြီး၊ ပေါင်းတာက ဘယ်နှစ်နာရီ ပေါင်းရတာလဲ။
Shinlay January 26, 2009 at 11:16 PM
I cooked with Rice cooker. I Put water Lat ta sit from the base of the rice cooker. Then cook it . Before all water left,please try it. If it is hard, put some water again.
when the peas are soft enough, leave it the rice cooker. Then you can steem it for 15 min.
Shinmin April 23, 2009 at 12:51 AM
မမလုရေ၊ ပဲပြုတ်ပြုတ်နည်းမှာဒီထက်လွယ်ပြီး အညှောက်ဖောက်စရာမလိုတဲ့နည်းလေးရှိရင်ပြောပြပေးပါ။
Jin Mau Ko May 16, 2010 at 6:10 AM
ဒီမှာ တော့ http://sforgn.blogspot.com/2009/06/blog-post.html ထမင်းပေါင်းအိုးနဲ့ ပြုတ် နည်း ရေးထားတယ် ..စမ်းကြည့် ပီးသွားဘီ..ဂွတ်တယ်..မြန်တယ်..ကြိုက်တယ်..အညှောက်ဖောက်စားတော်ပဲ ကို စားဆော်ဒါ. ဆီနဲနဲ.သကြားနဲနဲ..ဆားနဲနဲ ..ရေစပ်စပ်.ထမင်းပေါင်းအိုးထဲ ထည့် ပြုတ်..နာရီဝတ် ၁ နာရီ လောက်ဆို စား လို့ ရ ဘီ .
လုလုရေ ပဲပြုတ်ရသွားပြီ။ အညှောင့်တွေလည်း ထွက်လို့။ ပြုတ်တာကော ပေါင်းတာကော အဆင်ပြေတယ်။ ရှယ်ပဲ။ ကျေးဇူးကမ္ဘာဆိုင်း
ိစားတော်ပဲကို Snow pea လို့လည်းခေါ်ပါတယ်
thawthar July 1, 2011 at 12:22 AM